Dalxiiseyaal ku baaba’ay shil ka dhacay dalka Cuba – XOGMAAL.COM
Dalxiiseyaal ku baaba’ay shil ka dhacay dalka Cuba
Sharikadda Viazul ayaa waxaa maamula garabka militariga dalkaas u qaabilsan dhanka dalxiiska, waana mid kamid ah sababaha ay dalxiise yaashu u doorbidaan in ay tagaan jaziiraddaas.
By Soomaaliya	 Last updated Jan 12, 2019
Sida ay sheegayso warbaahinta maxalliga ah ee dalka Cuba shil gaari oo ka dhacay Bariga dalkaas ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan toddobo qof, oo ay kujiraan afar ajaanib ah, halka tobonaan kalena ay ku dhaawacmeen.
Laba kamid dadka ajaanibta ah ayaa kasoo jeeda dalka Argentina halka mid kalena uu ka yimid Faransiiska mid kalena uu u dhashay Jarmalka.
Dad gaaraya 33 qof ayaa ku dhaawacmay, oo ay kujiraan muwaadiniin u dhashay dalalka, UK, Maraykanka, Canada, faransiiska, Netherlands iyo Spain.
Gaariga baska ah ayaa shilka ku galay meel u dhow magaalada Guantánamo kaas oo u kala gooshayey Baracoa iyo magaalada caasimadda ah ee Havana,
Darawalkii gaadhiga ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in uu gaadhiga u waday si aayar ah balse uu xakamayn kari waayey waddada oo qoyanayd awgeed. goobjoogeyaal ayaa sheega in gaadhigaasi uu isku dayey in uu dhaafo gaadhi kale.
Gaadhiga baska ah oo ay lahayd sharikad dawli ah oo lagu magacaabo Viazul ayaa siday 40 rakaab ah, oo ay ku jiraan 22 ajaanib ah.
Dadka waxyeelladu gaartay ayaa waxaa kamid ahaa laba haween ah oo u dhashay dalka Argentina, oo 35 jirro aha, haweenay jarmalka u dhalatay oo 59 jir ahayd iyo nin Faransiiska u dhashay oo 67 jir aha, sida laga soo xigtay Raadiyaha Guantánamo oo liiska daabacay.
Dadka Cuba u dhashay ee shilka ku dhintay ayaa ahaa laba nin, oo da’ ahaan jiray 32 iyo 47, iyo haweeney 34 jir ahayd.
Dhanka kale, shan kamid ah dadka dhaawacmay ayaa la sheegay in ay xaaladoodu liidato. da’ dooda ayaa u dhaxaysa 42 ilaa 74.
Jidadka Cuba ayaa ah kuwo liita gaar ahaan kuwa gobolkaas sida uu sheegayo wariyaha BBC-da.
Shilalka gawaarida ayaa aad ugu badan Cuba kuwaas oo dhaliyey ku dhawaad 4,400 oo dhimasho ah, tan iyo sanadkii 2012-kii, sida lagasooo xigtay xog ay soo saareen masuuliyiinta dalkaas.
Maxakamadda Ciidanka oo Xukuntay Sarkaal Qori Dhashiika ah ku dilay Wiil dhalinyaro ah + Sawirro